जानकारी - Page9of 10 - KHASOKHAS
कुलमानविरूद्ध षडयन्त्र गर्नेलाई कारवाहीको निर्देशन
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले अघि बढाएको लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई अवरोध गर्न खोज्ने तीन सञ्चालक समिति सदस्य विरूद्व कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माले शुक्रवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मुलुकको उर्जा विकासमा अवरोध पु-याउन खोज्ने सञ्चालक समितिका तीन सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका हुन् । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यत्रय …
फोनमा कुरा गर्दा कहिलेकाँही तपाईलाई आफ्नो नाम, इमेल वा अरु कुनै कुराको स्पेलिङ बुझाउन कठिन हुने गरेको छ ? छ भने अब तपाईले फोनेटिक अल्फावेटको प्रयोग गरेर त्यो कठिनायी हटाउन सक्नुहुनेछ । सैन्य अपरेशन, हल्लाखल्लाको वातावरण, एयर कन्ट्रोल लगायतमा प्रयोग हुँदै आएको फोनेटिक अल्फावेट हाल फोनमा कुरा गर्दा पनि चलनचल्तीमा छ । फोनमार्फत नाम वा …
तपाइँ कति वर्षसम्म बाँच्नु हुन्छ, आफै थाहा पाउनुहोस्……
तपाईँलाई लाग्छ, मेरो उमेर कति होला भन्ने । तपाइँ ज्योतिषीसँग जानु भयो भने ज्योतिषीले तपाइँको भविष्य बताउन थाल्छ । तर तपाईँ कति वर्ष बाँच्नु हुन्छ, त्यो आफै पनि पत्ता लगाउन सक्ने ज्योतिष विज्ञान बताउँछ । सामुद्रिक शास्त्रकाअनुसार टाउको तथा निधारको रेखा हेरेर नै आफ्नो उमेर पत्ता लाउन सकिन्छ । यसका लागि कुनै पनि ब्यक्तिको निधारको …
नगर्नुस् यी १० गल्ती : जसले मृगौलालाई हानी पुर्याउँछ ,
किड्नी अर्थात मृगौला मानिसको शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफ गर्ने देखि , हर्मोन बनाउने , खनिज सोस्ने , मुत्र उत्पान गर्ने , टक्सिन अर्थात खराव पदार्थलाई शरिरबाट बाहिर निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जास्ता काम गर्छ । यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले …
कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ? थाहा पाउनुहोस ।
मानिसको चालचलन व्यावहार लगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ । को कुन बार र कति बेला जन्मेका हो उक्त साइतले स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको चरित्रको विषयमा थाहा पाउनुहोस । आइतबार आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका …
– अस्मिता खड्का रोजगारीको खोजीमा हजारौँ युवा विदेश पलायन भैरहेको बेला सलुजा आचार्य भने अमेरिकी जीवनशैली र सेवासुविधा छोडेर नेपाल फर्केकी छिन् । १९ वर्षलामो अमेरिका बसाईपछि दुई छोरा र श्रीमान सहित उनी नेपाल फर्केकी हुन । अमेरिका छोडेर नेपाल फर्कने कुरा सुनाउँदा उनका साथीहरुले भने, ‘नेपाल किन जाने ? के का लागि जाने ?’ …
नबोलिकनै मनका भावनाका बारेमा बताउन चुम्बन प्रभावकारी माध्यम हो । यसमा रचनात्मकता देखाउने प्रशस्त स्थान छ । आउनुस् जानौं चुम्बनका केही प्रकार : फ्रेन्च किस चुम्बनको सबभन्दा कामुक प्रकार हो यो । शुरूमा तपाईं आफ्नो प्रेमीको ओठमा बिस्तारै आफ्नो ओठ टाँस्नुस् । हतार नगर्नुस्, यो स्वर्गीय क्षणको क्रमिक आनन्द लिनुस् । त्यसपछि बिस्तारै जिभ्रो निकाल्नुस् …
अमेरिकामा दशैंको टिकाको साइत ९:५१ मा
यसपटक अमेरिकामा दशैंको टिकाको उत्तम साइत न्युयोर्क समय अनुशार अक्टोबर ११ तारिख मंगलबार विहान ९ बजेर ५१ मिनेट र विहान ११ बजेर १६ मिनेट जाँदा रहेको छ । न्युयोर्क निवासी पण्डित उद्धव शास्त्रीले उत्तम साइत विहान ९ बजेर ५१ मिनेट र ११ बजेर १६ मिनेट जाँदा रहेपनि दिउसो काममा जानेहरुका लागि विहान ६ बजेर …
दसैंको टीकाको उत्तम साइत पौने ९ बजे (भिडियो सहित)
यस वर्षको दसैंको टिकाको उत्तम साइत असौज २५ गते मंगलबार बिहान पौने नौ बजे रहेको छ । पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिले यस वर्षको टिकाको उत्तम साइत ८ बजेर ४५ मिनेटमा रहेको जनाएको हो । आश्विन शुक्ल दशमीका दिन मान्यजनको हातबाट देबीको प्रसाद ग्रहणका लागि विजया दशमीको दिनभर नै उत्तम साइत भएकोले जुनसुकै बेला टीका प्रसाद …